Inotevera Hurricane Karen inotyisidzira Caribbean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Inotevera Hurricane Karen inotyisidzira Caribbean
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Puerto Rico Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trinidad neTobago Breaking News • US Virgin Islands Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Parizvino Karen iDropical Dutu rine zvese zvinongedzo zvekuve anothr Hurricane. A Watch yakapihwa US Virgin Islands nePuerto Rico, kusanganisira Vieques naCulebra. Hurumende yeAntigua neBarbuda yakaburitsa Tropical Storm Watch yeBritish Virgin Islands. Pfupiso yewatch uye nyevero mune zvinoitika: Yambiro yeTropiki Dutu iri kushanda ... * Trinidad neTobago * Grenada nekutsamira kwayo * St. Vincent neGrenadines A Tropical Storm Watch iri kushanda ... * US Virgin Islands * Puerto Rico, kusanganisira Vieques neCulebra * British Virgin Islands A Tropical Storm Warning zvinoreva kuti mamiriro ekunze anotonhora anotarisirwa kumwe kunhu munzvimbo yambiro. Iyo Tropical Storm Watch inoreva kuti mamiriro ekunze enzvimbo dzinopisa anogona kuitika munzvimbo yekurinda, kazhinji mukati memaawa makumi mana nemasere. Kufarira kumwe kunhu mudiki maAntilles kunofanirwa kuongorora kufambira mberi kwaKaren. Pa 48 AM AST (1100 UTC), iyo nzvimbo yeTropical Storm Karen yaive padhuze ne1500 North, longitude 12.5 West. Karen ari kufamba akananga kumadokero-kuchamhembe kwakadziva kumadokero padyo ne61.7 mph (13 km / h) uye kufamba uku kunotarisirwa kuenderera nhasi. Kutendeuka kwakananga kuchamhembe kwakadziva kumadokero kunofanirwa kuitika Muvhuro, kuchiteverwa netende yakananga kuchamhembe neChipiri. Panzira yekufungidzira, iyo nzvimbo yaKaren ichaenda kubva kuWindward Islands gare gare nhasi, uyezve kuyambuka Gungwa reCaribbean kumabvazuva manheru ano neMuvhuro. NeChipiri, Karen anotarisirwa kusvika kuPuerto Rico neVirgin Islands. Mhepo dzakasimba dzakasimba dziri pedyo ne20 mph (40 km / h) ine mhepo dzakakwirira. Shanduko shoma musimba inofungidzirwa mumaawa makumi mana nemasere anotevera. Dzinopisa-dutu-remhepo mhepo inowedzera kunze kusvika kumamirimita zana nemakumi masere neshanu, kunyanya mumashure kumabvazuva kwenzvimbo. Iyo inofungidzirwa padiki yepakati kumanikidza ndeye 65 mb (48 inches). DZINOGONESA DZENYIKA DZINOTSANYA ---------------------- Mhepo: Dutu remhepo rinotyisa rinotarisirwa mukati menzvimbo yambiro kusvika masikati ano kana manheru. Tropical dutu mamiriro anogona kuitika mukati mekutarisa nzvimbo kutanga neChipiri. MVURA: Karen anotarisirwa kuburitsa kunaya kwemvura kunotevera kuburikidza neChitatu: Windward Islands ... 105 kusvika ku165 inches, yakasara masendimita masere. Puerto Rico neVirgin Islands ... 1006 kusvika ku29.71 inches, yakasarudzika 3 inches. Leeward Islands ... 6 kusvika 8 inches, yakasarudzika 2 inches. Kure kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweVenezuela neBarbados ... 4 kusvika ku6 inches. Mvura idzi dzinogona kukonzera mafashama emvura uye kudonha kwemadhaka, kunyanya munzvimbo dzemakomo.